Gen Khaliif Ciise Mudan oo qado sharaf u sameeyay taagerayaashii ololihiisa doorashada sidoo kalena ku dhawaaqay Xisbi Cusub. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Gen Khaliif Ciise Mudan oo qado sharaf u sameeyay taagerayaashii ololihiisa doorashada sidoo kalena ku dhawaaqay Xisbi Cusub.
Gen Khaliif Ciise Mudan oo qado sharaf u sameeyay taagerayaashii ololihiisa doorashada sidoo kalena ku dhawaaqay Xisbi Cusub.
January 10, 2019 - By: Mohamud Nadif
Generaal Khaliif Ciise Mudan ayaa xarunta dalxiiska ee Hido Raac Garoowe wuxuu qado sharaf ugu sameeyay qaar ka midda taagerayaasha ololihiisa doorashada iyo dadkii la shaqaynayay, Gen Khaliif ayaa uga mahadceliyay shaqada wanaagsan ee ay soo qabteen iyo sida Akhlaaqiyaad iyo habsami socodka lahayd ee ay u maamuleen ololaha.
” Waan idinka mahadcelinayaa shaqadii wanaagsanyd ee aad soo qabateen intii ololuhu socday iyo sida wanaagsan ee aad u maamusheen, wax kastaa waa calaf, dhamaanteena waa guulaysanay” ayuu yiri Gen Khaliif Ciise Mudan.
Sidoo kale Gen Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in ay daahfuri doonaan Xisbi cusub waxa uuna sheegay in xisbigaan uu noqon doono mid u adeega bulshada Soomaaliyeed isla markaan uu rajaynayo in uu sii wadi doono halganka ay ku jireen iyo sidii ay u horumarin lahaayeen ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland.